E-News Nepali || Fast and Accuracy » झापाका विद्यार्थी अनिल प्रधानले बनाए जङ्गली हात्ती धपाउने साइरन ड्रोन
झापाका विद्यार्थी अनिल प्रधानले बनाए जङ्गली हात्ती धपाउने साइरन ड्रोन
झापाका विद्यार्थी अनिल प्रधानले जङ्गली हात्ती धपाउने साइरन ड्रोन विकास गरेका छन् । कक्षा १२ मा अध्ययनरत भद्रपुर नगरपालिका–१ निवासी प्रधानले आफ्नै घरमा उक्त ड्रोन बनाएका हुन् । उनले साइरन जडान गरिएको ड्रोनको सफल र प्रभावकारी प्रयोग पनि गरेका छन् ।
उनले भने, “मेरो घर आसपासमा जहिले पनि जङ्गली हात्ती आउने र दुःख दिने गथ्र्यो । झापामै हात्तीको आक्रमणबाट धेरै मानिसको मृत्यु भएको देखियो । यसले गर्दा हात्तीलाई कसरी धपाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको थिएँ । ”
मौरी कराएको आवाजबाट हात्ती सबैभन्दा बढी डराउने तथ्य फेला परेपछि मौरीको भुनभुन आवाजलाई ड्रोनमा जडान गरिएको उनले बताए । यो ड्रोनमा रातो बत्तीसमेत प्रयोग गरिएको छ ।
हात्तीको नजिकै लगेर ड्रोन उडाएपछि मौरी आएको त्रासमा हात्ती ठूलो आवाजका साथ गर्जंदै जङ्गलतिर भाग्ने गरेको प्रधानले बताए । पाँच किलोमिटर दूरीसम्म रिमोटले काम गर्ने भएकाले आफू पनि सुरक्षित भएर हात्तीलाई टाढाबाट नै धपाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
डिभिजन वन कार्यालय, झापाको समेत सहभागितामा स्थानीय बासिन्दासहितको टोलीले हात्ती धपाउन साइरन ड्रोन परीक्षण गरेको थियो । गत बिहीबार र शुक्रबार राति यसको परीक्षण गरिएको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा टीकाराम उप्रेतीले लेखेका छन् ।
प्रकाशित मिति ३ कार्तिक २०७६, आईतवार ०४:०८
दुख’द खबर जिप दु’र्घटनामा परि जिल्ला प्रशासन कार्याल’यका प्रशास’कीय अधिकृत श्याम न्यौपा’नेको नि’धन
अमेरिका पुगेपछि पनि सदिक्षा बास्तोलालाई ध म्की, ‘दाईको लागि न्याय माग्दा’ मैले यस्तो भोग्नुपर्यो भन्दै फेसवुक लाइभमा आएर सुनाइन् घटना (भिडियो हेर्नुस्)
सिडिओ कार्यालय गुल्मीका १४ कर्मचारी सवार जिप दुर्घटना, दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु
यसरी बन्दै छ नयाँ सरकार, देउवा र प्रचण्डको मध्यरातमा गोप्य सहमति !
भारतमा बाबा रामदेव ड्राइभर बनेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई दिए सेवा !(भिडियो सहित हेर्नुहोस)
आमालाई घरको छतबाट फाल्ने यि हुन् सिभिल अस्पतालका डाक्टर
प्रधानअध्यापकको अनौठो धन्दा ! विद्यार्थीलाई मल बोकाउने, बाख्राको खोरमा सुताउने